काठमाडौं : बागलुङको सुन्दर पहाडी इलाका गलकोटमा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला भइरहेको छ। ‘गलकोट कला प्रतिष्ठान बागलुङ’ले अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला र प्रदर्शनी आयोजना गरेको हो। कार्यशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती आर्जन गरेका मूर्तिकारहरूले कार्यशाला स्थलमै बसेर मूर्तिहरू सिर्जना गरेका छन्। का...
गलकोट नगरपालिकाः काँग्रेस प्रमुख र माओवादी उपप्रमुखमा विजयी
जिल्लाको गलकोट नगरपालिकामा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन्। गलकोट नगरप्रमुखमा गठबन्धनतर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली काँग्रेसका भरत शर्मा गैरे र उपप्रमुखमा माओवादीका फमलाल निउरेर विजयी भएका हुन्।...
नागरिक दैनिक3दिन पहिले
गलकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा गैरे उपप्रमुखमा निउरे विजयी
गलकोट नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भरत शर्मा गैरे पाँच हजार ४ सय १४ मत सहित विजयी बनेका छन् । गत बैशाख...
नयाँ पत्रिका3दिन पहिले
संरक्षण पाएपछि फेरिँदै गलकोट कोतघर
विसं १६३१ देखि १८४४ सम्म राज्य सञ्चालन भएको ऐतिहासिक गलकोट कोतघरको मुहार फेरिएको छ । त्यसबेला गलकोट चौबिसे पर्वत राज्यअन्तर्गतको शक्तिशाली राज्यमा पथ्र्यो । गलकोट नगरपालिका–३ स्थित उक्त कोतघरलाई आव २०७६र०७७ मा कोतघरलाई नगर गौरवको योजनामा समेटेर संरक्षण र विकासको काम थालिएको थियो । नगरपालिकाको आफ्नै पहल र लगानीमा कोतघरले नयाँस्वरुप पाएको हो । कोतघरलाई …
प्रेमकुमारी बनिन् गलकोट नगरको उत्कृष्ट महिला उद्यमी
जिल्लाको गलकोट नगरपालिकाले गराएको प्रतिस्पर्धाबाट प्रेमकुमारी पुन उत्कृष्ट महिला उद्यमी बनेकी छिन्।...
गलकोट नगरपालिकामा नगर प्रहरी
बागलुङ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ती प्रक्रिया शुरू गरेको छ । नगरका योजना कार्यान्वयनका बेला देखिने सुरक्षा समस्या र सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षणका लागि नगर प्रहरी गठन गर्न थालिएको हो । गतवर्ष नै नगर प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन तयार गरेको नगरले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बागलुङका दश स्थानीय तहमध्ये नगर प्रहरी भर्ना गर्ने गलकोट तेस्रो नगरपालिका हो । नगरले तत्कालका लागि दुईजना जवान नियुक्त गर्ने सूचना अधिकारी तुलबहादुर विकले बताए । अहिले नियुक्त भएका प्रहरीले कार्यालय र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको काममा लाग्नेछन् । ‘कार्यालयमा भीड लाग्दा व्यवस्थापन गर्नेसमेत कोही छैन, कहिलेकाहीँ अनावश्यक मान्छेले दुःख दिन्छन्,’ नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘ठूला समस्या आउँदा नेपाल प्रहरी छ, स–साना समस्या त हाम्रो प्रहरी पनि सक्रिय रहन सक्छ ।’ यसअघि बागलुङ र ढोरपाटन नगरपालिकामा नगर प्रहरी गठन गरिएको थियो । नेपाल प्रहरीले नगरभित्रको शान्तिसुरक्षामा सहयोग गर्ने भए पनि नगरका कतिपय काममा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग माग्न नसकिएको उनले बताए । ‘गतवर्ष हामीले घरको नक्सा पाससम्बन्धी कानून ल्यायौं तर कार्यान्वयनका बेला चुनौती आए, कम्तीमा खोजी गर्न, सचेत गराउन प्रहरी हुँदा सहज हुन्थ्यो,’ गैरेले भने, ‘सडकमा फोहोर गर्ने, सडकमै व्यापार गर्नेलाई नगरभन्दा कर्मचारीलाई टेरेनन्, आफ्नै प्रहरी भएपछि सहज हुने भो,’ उनले भने । रासस
एनभिए क्लब च्याम्पियनसिप : पुलिस र गलकोट स्पोर्टस् क्लब शीर्ष स्थानमा
महिलातर्फ एपिएफ र ढोरपाटन स्र्पोट्स् क्लब तथा न्यू डायमण्ड र एभरेस्ट भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
भलिबल च्याम्पियनसिप– पुलिस र गलकोट अग्रस्थानमा
नेपाल पुलिस क्लब र गलकोट स्पोर्टस क्लब छैटौं एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप २०७८ को दुई खेलमा जित निकाल्दै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । पुलिसले दोस्रो दिन मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई ३ – ० सोझो सेटमा पराजित गर्दै अंक तालिकामा पहिलो स्थान बनाउन सफल भएको हो । पुलिसले मणिमुकुन्दलाई २१ – १४, २१–१५ र २१–१७ ले पराजित गरेको हो । प्रतियोगिताको पहिलो दिन उद्घाटन खेलमा पनि पुलिसले दावाँली मिलन क्लबलाई पराजित गरेको थियो । पुलिस समूह बि मा ६ अंकका साथ पहिलो स्थानमा र
साउन ७, बागलुङ । विसं २०७३ मा स्थापना भए पनि गलकोट नगरपालिका मध्यपहाडी लोकमार्गको बीच भागमा पर्ने भएकाले चल्तीको पालिकामा पर्दछ । पर्याप्त समथर भू–भाग भएको नगरपालिकाको केन्द्र मजुवाफाँट र हटिया बजारमा घर निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उर्वर भूमि रहेको गलकोट क्षेत्रमा धान झुल्ने खेत विस्तारै शहरमा परिणत हुँदै आएका छन् । बढ्दो शहरीकरणसँगै नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न थालेको छ । नगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापनका लागि जग्गा अभावले लामो समयदेखि समस्या थियो तर पछिल्लो समय नगरपालिकाले जग्गा भाडामा लिएरै फोहरलाई मोहरमा बदल्न थालेको छ । यसअघि हटिया बजारको फोहर गौदीखोलामा फालिँदै आइएको थियो । बजारकै छेउमा फोहर फाल्दा बजार क्षेत्रनै दुर्गन्धित भएको भन्दै जनस्तरबाट नगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह हुँदै आएको थियो । नगरपालिकाले जग्गा अभावमा फोहरको डम्पिङ साइट खोज्न नसके पछि जग्गा भाडामा व्यवस्थापन गरेर अहिले फोहर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ । गलकोट–९ स्थित दरमखोला किनार नजिकै जग्गा व्यवस्थापन गरी फोहर प्रशोधन उपकरण जडानसमेत गरिसकिएको छ । कोरोना कहरका कारण फोहर प्रशोधनमा कर्मचारी खटाउन समस्या भएको र आगामी दुई महीनाभित्रै नगरपालिकाले फोहर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । फोहर व्यवस्थापनका लागि लामो समयको प्रयत्न र पहलमा हटिया बजारभन्दा केही पर वडा नम्बर ९ मा तीन रोपनी जग्गा मासिक रू. २० हजार भाडा तिर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए । ‘फोहर फाल्ने डम्पिङ साइट पाएनौँ, त्यसैले केही उपकरण खरिद गरेर फोहर प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने नगरपालिकाको नीतिअनुसार प्रशोधन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणसँगै उपकरण जडान भएको छ’, नगर प्रमुख शर्मा गैरेले भने, ‘भाडामा जग्गा लिएर कुहिने फोहर व्यवस्थापन र नकुहिनेलाई प्रशोधन गरी प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने काम अघि बढेको छ, अब सबै तयारी सकिएकाले छिट्टै सञ्चालमा ल्याउने तयारी छ ।’ नगरपालिकाले तीन रोपनी जग्गामा सडक पुर्‍याउने, विद्युतीकरण गर्ने, ट्रस हाल्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा रू. २३ लाख र उपकरण खरिद तथा जडानमा रू. १० लाख खर्च गरिसकेको प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । अहिले नगरपालिकाले एउटा ट्र्याक्टरमा फोहर संकलन गर्दै आएको छ । जिल्लामै तीव्र शहरीकरण भएको स्थानमा पर्ने गलकोटमा घर थपिँदै गए पछि फोहर व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएको हो । संकलित कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिने छ । कुहिने फोहरको मल बनाइनेछ भने नकुहिने फोहरलाई टुक्राउने, धूने र पुनः प्रयोगका लागि विक्री गरिनेछ । नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा लाग्ने सबै खर्च फोहर प्रशोधनपछि विक्री गरेर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा अभाव रहेका कारण व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्दा निकै महँगो भएपछि भाडाको जग्गामा फोहर व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । फोहरलाई मोहर बनाएर बिक्री गर्ने योजना नगरपालिका स्थापना भएको पाँच वर्षमा पूरा हुन थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । गलकोटमा जग्गा अभावकै कारण बसपार्क नहुँदा सडकमै सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस
विसं २०७३ मा स्थापना भए पनि गलकोट नगरपालिका मध्यपहाडी लोकमार्गको बीच भागमा पर्ने भएकाले चल्तीको पालिकामा पर्दछ । पर्याप्त समथर भू–भाग भएको नगरपालिकाको केन्द्र मजुवाफाँट र हटिया बजारमा घर निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उर्वर भूमि रहेको गलकोट क्षेत्रमा धान झुल्ने खेत विस्तारै शहरमा परिणत हुँदै आएका छन् । बढ्दो शहरीकरणसँगै नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न थालेको छ । नगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापनका लागि जग्गा अभावले लामो समयदेखि समस्या थियो तर पछिल्लो समय नगरपालिकाले जग्गा भाडामा
गलकोट नगरपालिका - 'एग्रो टुरिज्म’ सपना
गलकोट कृषि पर्यटन ‘एग्रो टुरिज्म’ विकासको सपना बोकेर गलकोटमा बृहत बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म सञ्चालन गरिएको छ । गलकोट नगरपालिका–५ हरिचौरका ३९ वर्षका टोपबहादुर खत्री र